कार्यमा सफलताका लागि दैनिक प्रभावकारी प्रार्थना | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना कार्यमा सफलताको लागि दैनिक प्रभावकारी प्रार्थना
आज हामी काममा सफलताको लागि दैनिक प्रभावकारी प्रार्थना निकाल्दैछौं। प्रार्थना एक चीज हुनु पर्छ जुन दैनिक गरिन्छ। चाहे तपाईंले हिजो जति प्रार्थना गर्नुभयो; यसले आज तपाइँको प्रार्थनालाई असर गर्ने छैन किनकि हरेक नयाँ दिनमा यसको आशिष् र दुष्ट छ। हामीले बिभिन्न कथाहरू सुनेका छौं कि कसैले एक दिनमा कामबाट कसरी बन्द हुनेछ र अर्को दिन काममा कसरी फर्किने छ उसको लागि बर्खास्त गरिनेछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जब एक कर्मचारी कम उत्पादक हो, एक नियोक्ताले त्यस्तो कर्मचारीलाई रिहा गर्न गल्ती गरिरहेका हुँदैनन्। त्यसो भए, प्रत्येक कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउन र प्रकोपको कामका जोखिमहरू हुनबाट रोक्नको लागि काममा सफलताका लागि केही प्रभावशाली दैनिक प्रार्थना हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
त्यहाँ कुनै मानिस छैन, चाहे जति थोरै वा ऊ हो, त्यसले काममा सफलता चाहँदैन। चाहे तपाईं एक स्वयं-रोजगार व्यक्ति हो वा तपाईं कसैलाई काम गर्दै हुनुहुन्छ, सबै जना जहिले पनि उनीहरूले के गर्छन् भन्नेमा सफल हुन चाहन्छन्। र अक्सर, मानिसहरूले सफलताको लागि प्रयास गल्ती गर्दछन्; हामीले काममा लगानी गरेका प्रयासको परिमाणबाट हामी सफलतालाई दर दिन्छौं। यद्यपि यो इच्छा गर्ने वा भाग्नेको होइन तर कृपा देखाउने परमेश्वरकै हो, त्यसैले हामीले यो बुझ्नुपर्दछ कि यस संसारमा भएका सबै प्रयासहरू लगानी गर्दा पनि सफलताको ग्यारेन्टी हुँदैन।
तसर्थ, तपाईं के मा पेशेवर प्रमाणित भए पनि, तपाईं अझै पनि काम मा सफल हुन को लागि परमेश्वरको आशीर्वाद आवश्यक छ। मोरेसो, त्यहाँ केहि सफलताहरू छन् जुन हामी हाम्रो काममा यत्तिको चाहना गर्छौं कि हामी उनीहरूलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौं जबसम्म परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्न।
बाइबलबाट सन्दर्भ रेखाचित्र जहाँ यो भन्छ कि कसैले पनि केहि पनि प्राप्त गर्दैन जबसम्म यो परमेश्वरबाट नदिएको हो। अचम्म मान्नुपर्दैन, बाइबलले चेताउनी दियो कि हामी सोध्छौं र यो हामीलाई दिइनेछ, दस्तक, र यो खुला हुनेछ, खोज्नुहोस् र हामी भेट्टाउनेछौं। यो थाहा पाइसकेपछि, हामीले काममा सफलताको लागि प्रभावकारी दैनिक प्रार्थनाहरूको एक सूची संकलित गरेका छौं। यी प्रार्थनाहरू मजाकका साथ लिनु हुँदैन, र तपाईंले कार्यको ठाउँमा चमत्कारी मोड लिन यी प्रार्थनाहरू दिनहुँ भन्नु एक कर्तव्यको आधार बनाउनु पर्छ।
स्वर्गका राजा, मलाई अर्को सुन्दर दिनको साक्षी दिनको लागि अनुग्रह दिनको लागि म तपाईंलाई धन्यबाद दिन्छु, जीवनको यो अनमोल उपहारको लागि धन्यवाद दिन्छु जुन तपाईंले आज मलाई अझ राम्रो गर्नलाई प्रदान गर्नुभएको छ, तपाईंको नाम येशूको नाममा उच्च पारियोस्।
बाइबलले हामीलाई सल्लाह दिंदा कि हामीले प्रार्थना गर्नु अघि हरेक क्षमालाई व्यवहार गर्नुपर्दछ, मलाई हिजो पार गर्ने प्रत्येक पुरुष र महिलालाई म क्षमा दिन्छु, म उनीहरूलाई मेरो क्रोधको पासोबाट छुटाउँछु, र प्रार्थना गर्दछु कि भगवानले मेरो पापलाई मेरो नाममा क्षमा गर्नुहुनेछ। येशू
म सबै शैतानी शक्तिलाई बाँध्छु जसले मानिसहरूलाई काममा उनीहरूको पसीने पसीनाले लुट्छ। म असफलताका साथ जनताको कडा परिश्रमलाई निराश पार्ने हरेक शक्तिलाई नष्ट गर्छु, म भन्छु कि येशूको नाममा त्यस्तो भूतले मेरो भागमा नाश गरेको छ।
म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु कि मानिसहरूलाई कामको ठाउँमा अकल्पनीय गडबडी गराउने प्रत्येक शक्तिले येशूको नाममा मेरो जीवनमा कार्य गर्न बन्द गर्नुपर्दछ।
म सर्वशक्तिमानको हातमा गर्छु जुन म आज गर्दैछु सबै कुरा गर्दैछु, र म प्रार्थना गर्छु कि तपाईका हातहरू येशूको नाउँमा उनीहरूमाथि रहोस्।
म तपाईंको प्रत्येक बहुमूल्य रगतको साथ काम गर्छु। म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईका हातहरू प्रत्येक उपकरणमा रहोस् जुन म आज येशूको नाममा प्रयोग गर्दैछु।
किनकि बाइबलले भन्छ कि यो इच्छा गर्ने अथवा भाग्ने मानिसका होइन तर दया देखाउने परमेश्वरकै हो। आज ममाथि दया गर्नुहोस्। म आध्यात्मिक गतिको अनुग्रहको लागि प्रार्थना गर्दछु जसले मलाई काममा सबैको कल्पनाशक्तिभन्दा पर सफल बनाउँदछ; प्रभु येशूको नाममा मलाई यो दिन्छ।
प्रभु, म आज प्रार्थना गर्दछु कि तपाईले मलाई मेरा सबै कामहरू सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नुहुनेछ। म कामको ठाउँमा थकित हुन नदिन बलको लागि प्रार्थना गर्दछु। म आदेश दिन्छु कि तपाईं यो मलाई येशूको नाममा दिनुहोस्।
तपाईंले आफ्‍नो वचनमा भन्नुभएको छ कि हामीले ती सबै भारीहरू बोकेका सबै आउनुपर्नेछ, र तपाईंले हामीलाई विश्राम दिनुहुनेछ। म आज तपाईंको विश्रामको लागि प्रार्थना गर्दछु, र म तपाईंलाई भन्छु कि तपाईंको करुणाबाट, आज तपाईंले मलाई येशूको नाममा मेरो बोझ बोक्न सहयोग गर्नुहुनेछ।
प्रभु, यो एक महान कामदारको उदाहरण हुन पाउँदा खुसीको कुरा हो, म तिमीलाई भन्छु कि तपाईले मलाई सधैं येशूको नाममा राम्ररी राम्ररी सम्पन्न गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ।
बाइबल भन्छ कि उत्तरार्द्धको महिमा पहिलेको भन्दा बढी हुनेछ, प्रभु, मैले हिजो गरेको शोषण भन्दा पनि, दुई गुणा दुबै पट्टि, म तिमीलाई भन्छु कि तिमीले मलाई आज येशूको नाममा अझ बढी सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछौ।
काम मा मलाई निराश गर्न कसम खाएको छ कि हरेक शक्ति, म तपाईं येशू को नाम मा आगो लाग्ने भनेर आदेश।
म आज काममा नकारात्मकताको हरेक शक्तिको बिरूद्ध आउँछु। म आदेश दिन्छु कि उनीहरूले येशूको नाममा अपरेशन रोक्छन्।
प्रभु, म कहिले असफल हुन्न किनकि येशूले कहिले असफलता अनुभव गर्नु भएन। म येशूको नाममा मेरो काम मा सफलता डिक्री।
धर्मशास्त्रले भन्छ कि जसले परमप्रभुमा भरोसा गर्दछ उ आफ्ना सामर्थ्यहरूको नवीकरण हुनेछ। म हिजो भन्दा एक नयाँ शक्ति को लागी प्रार्थना, म तपाईं येशूको नाम मा यो मलाई पठाऊ कि प्रार्थना छ।
येशू, म तपाईंलाई सिकाउन र मलाई भविष्यमा भेट्न चाहन्छु, दानियल र तीन हिब्रूहरूलाई दिएको भन्दा अझ उत्कृष्टताको भावना मलाई उडाउनुहोस्, म तिमीहरूलाई भन्छु कि यो येशूको नाममा मलाई दिनुहुनेछ।
पवित्र शास्त्रले भन्छ, बुद्धिले निर्देशन दिन लाभदायक छ, प्रभु येशू, म तपाईलाई कामको तनावबाट बच्न बुद्धि दिनुहुन्छ भन्ने प्रार्थना गर्दछु, म तिमीलाई आज्ञा गर्दछु कि यो येशूको नाममा मलाई दिनुहोस्।
धर्मशास्त्रले मलाई यो बुझाउँदछ कि हरेक राम्रो विचार परमेश्वरबाट आउँदछ। म आदेश दिन्छु कि तपाईले मलाई मेरो कम्पनीलाई अगाडि बढ्नको लागि बुद्धि र विचार दिनुहुन्छ, मेरो कम्पनी अर्को तहमा उडान गर्न आवश्यक छ भन्ने धारणा, म तिमीलाई भन्छु कि यो येशूको नाममा मलाई दिनुहोस्।
म येशूको नाममा घोषणा गर्दछु कि मेरो काम ख्रीष्टको रगतले सुरक्षित छ। कुनै शक्ति, योजना वा प्रान्तहरू येशूको नाममा मेरो काम खोसेर लानेछैन।
अघिल्लो लेखमाबुझ्ने बारे बाइबल पदहरू
अर्को लेखमाबच्चाहरूको लागि बाइबल पदहरू
EMMANUEL ETADERHI अगस्त,, २०१ At बिहान :23::2021 बिहान
उत्कृष्ट प्रार्थना! धन्यवाद।
थेरेस अगस्त,, २०१ At बिहान :31::2021 बिहान
धन्यबाद beaucoup डालो!
Je ne parle pas anglais quand je vais sur YouTube les prières sont en anglais।
N'ya t il pas des vidéos traduit svp?
Soyez béni par le nom puissant de Jésus Christ।
२० चिन्ता र तनावको बारेमा बाइबल पदहरू